Dream League Soccer 2022 Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao] - Luso Gamer
Dream League Soccer 2022 Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao]
Desambra 10, 2021 by John Smith
Ny Dream League Soccer dia noforonina voalohany ary navoakan'ny British Studio tamin'ny 2011. Na dia tsaroana tamin'ny anaran'ny First Touch Soccer aza izany. Taty aoriana dia novana anarana izy io ary nosoloina DLS. Ankehitriny dia navoaka ny kinova farany an'ny DLS Dream League Soccer 2022 azo tratrarina eto.
Rehefa mandinika ny tsenan'ny fanatanjahantena azo tratrarina amin'ny Internet izahay. Avy eo dia hitanay ny fanatanjahantena Football izay heverina fa tena tiana sy nilalao lalao eran-tany. Na dia tia milalao sy mijery fifaninanana samihafa mifandraika amin'ny baolina kitra aza ny mpankafy eran'izao tontolo izao.
Saingy androany eto izahay dia nitondra ny DLS 2022 Apk Android ho an'ny mpilalao android. Izany dia azo alaina avy eto amin'ny safidy kitihina iray. Eto isika dia hiresaka momba ny fampahalalana fototra miampy ny dingana amin'ny fametrahana sy ny fampiasana ny Lalao Football App.
Inona no atao hoe Dream League Soccer 2022 Apk
Dream League Soccer 2022 Download dia fampiharana lalao fanatanjahantena baolina kitra an-tserasera namboarin'ny First Touch Games Ltd. Tamin'ny taon-dasa dia navoaka tamin'ny Novambra 2020 izy io. Ankehitriny dia navoaka tamin'ny Desambra 2021 ny fampiharana lalao farany.
Hatramin'ny nanombohan'ny andian-tantara lalao dia maro ny fanovana natao tao anatiny. Ny sasany amin'ireo fanovana lehibe ireo dia misy ny fampisehoana sary sy ny laharan'ny mpilalao. Ankoatra izany, ny dashboard fanamboarana mandroso miaraka amin'ny fitaovana fanovana samihafa.
Na dia ao anatin'ny dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan -dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-davitra iray ihany, ireo manam-pahaizana dia mifantoka amin'ny lalao sy ny fomba mpilalao. Tsy nandroso ny teknolojia tamin’izany. Noho izany, ny mpamorona dia tsy afaka manatsara ny fampisehoana sy ny traikefa amin'ny lalao.
Saingy ankehitriny ny orinasa dia nampiasa ny rafitra grafika mandroso indrindra. Izany dia ahafahan'ny mpilalao mankafy traikefa amin'ny baolina kitra amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny ekipa hafa. Na ny mpankafy aza dia afaka miditra sy mandray anjara amin'ny fifaninanana maro. Noho izany dia vonona ny hiady amin'ny mpilalao hafa ianao ary hametraka DLS 22.
anarana Dream League Soccer 2022
Developer Voalohany Touch Games Ltd.
Anaran'ny fonosana com.firsttouchgames.dls7
Raha miresaka momba ny fanampim-panazavana lehibe sy ny fanovana natao tao anatin'ny lalao. Avy eo izahay dia nahita Manatsara ny sary, Live Team Customizer, Multiple Theme Selector, New Nohatsaraina Gameplay, Dress Customizer, Live Tournaments, Stadium Customizer ary maro hafa.
Ireo izay diso fanantenana hatrany amin'ny mpanazatra azy dia afaka manolo mora foana ireo mivantana. Maherin'ny 4000 mahery ny mpilalao ekipa manana fahazoan-dàlana azo isafidianana. Ankoatra izany, ireo mpilalao klioba malaza isan-karazany dia tafiditra ao anaty fivarotana.
Raha mitady fanampiana an-tserasera ianao, dia manoro hevitra ny mpilalao haka mpiasa sy scout izahay. Ireo masoivoho sy scout vaovao dia hanampy amin'ny fitadiavana talenta tsara eran-tany. Manofa ny sasany amin'ireo mpanazatra tsara indrindra ary ampiofaho ny mpilalaonao mifantoka amin'ny fahaiza-milalao sy ara-batana ihany koa.
Rehefa azonao antoka ny fananganana ekipa tonga lafatra. Apetraho amin'ny mpifanandrina hafa ao anaty kianja filalaovana ny ekipanao. Na ny fandresena amin'ny fotoana ara-potoana aza dia hanampy amin'ny fandraisana anjara amin'ny vanim-potoana sy fifaninanana samihafa.
Mpizara firenena maro no natambatra ho fampiantranoana lalao ekipa samihafa. Mifaninana amin'ireo mpilalao an-tserasera hafa azo tratrarina ary asehoy ny talentan'ny ekipanao maneran-tany. Noho izany dia vonona ny hijery ny fahaizanao milalao ianao dia apetraho ny DLS 2022 CH Play.
Mpilalao manana fahazoan-dàlana 4000 mahery no misy.
Mifaninana amin'ny fifaninanana kaopy 10 ary amboary ny ekipanao eran-tany.
Ny fizarana fanehoan-kevitra dia hanampy amin'ny fanamafisana ny tebiteby.
Ny mpanazatra dia hanampy ireo mpilalao ivelan'ny fiofanana amin'ny lalao hendry sy ara-batana.
Ampiasao ny customizer mivantana hanovana ny sarin'ny ekipa sy ny kitapo.
Na izany aza dia hanampy amin'ny fanovana ny fahombiazan'ny mpilalao.
Mandraisa anjara amin'ny fifaninanana eo an-toerana sy iraisam-pirenena.
Ny fanangonana mozika tsara sy fanamafisam-peo dia ampiana.
Ny interface tsara dia mavitrika sy mora amin'ny finday.
Ahoana ny fandefasana ny Dream League Soccer 2022 Apk OBB
Raha mikasika ny fampidinana ny kinova farany amin'ny rakitra fampiharana lalao. Ny mpampiasa Android dia afaka matoky ny tranokalanay satria eto amin'ny tranokalanay no atolotray ny rakitra Apk tena izy sy tany am-boalohany. Mba hahazoana antoka fa ny mpampiasa dia hifalifaly amin'ny vokatra mety.
Nanakarama ekipa manam-pahaizana ahitana matihanina samihafa izahay. Raha tsy hoe azon'ny ekipa antoka ny fampandehanana ny fichier gaming. Tsy manolotra izany mihitsy izahay ao anatin'ny fizarana fampidinana. Raha te-hisintona ny kinova nohavaozina amin'ny fampiharana lalao dia kitiho ny rohy eto ambany.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana ny Apk
Voalohany, misintona ny kinova farany amin'ny lalao Apk plus OBB.
Tadiavo izao ny rakitra avy amin'ny fizarana fitahirizana finday.
Ary tsindrio ny rakitra Apk hanombohana ny dingana fametrahana.
Tsidiho izao ny menio finday ary alefaso ny lalao.
Aza adino velively ny hamela loharano tsy fantatra.
Raha ny tena izy, eto ny fampiharana lalao atolotray dia tany am-boalohany ary tsy mila alalana. Talohan'ny fanolorana azy tao anatin'ny fizarana fampidinana dia efa nametraka ny lalao tamin'ny finday samihafa izahay ary tsy nahita olana. Noho izany dia afaka mankafy lalao tany am-boalohany maimaim-poana ny mpampiasa android.
Eto amin'ny tranokalanay dia efa namoaka fampiharana lalao baolina kitra maro samihafa izahay. Izay malaza sy malaza eo amin'ny mpilalao. Raha te hijery an'ireny lalao ireny dia araho azafady ny rohy. Ireo dia FM 22 Apk ary Mpitantana Soccer 2022 Apk.
Noho izany dia mpankafy ny andiany DLS ianao ary niandry ny famoahana ny Apk sy OBB farany. Ankehitriny dia azo atao ny misintona avy amin'ny tranokalanay amin'ny safidy kitihina iray. Tsindrio fotsiny ny bokotra nomena ary ankafizo ny fametrahana ny Dream League Soccer 2022 Android farany.
Sokajy Sports, Games Tags Dream League Soccer 2022, Dream League Soccer 2022 Android, Nijery ekipa Soccer League 2022 Apk, Dream League Soccer 2022 Download, Lalao Football Post Fikarohana
DownHill Smash Apk Download ho an'ny Android [lalao]
BStation Apk Download Ho an'ny Android [Sarimihetsika+Series]